Teratany kanadianina teraka tany Trinité hahazo ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainana CTO
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Teratany kanadianina teraka tany Trinité hahazo ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainana CTO
Ny fitazonana ny tantaram-paritra dia zava-dehibe ho an'ny taranaka ho avy mba hahatakarana ny lovany. ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia nahita ilay mpitantara tantara tonga lafatra tany Trinité teraka Rita Cox kanadianina izay mitantara ny lova any Karaiba, ary hanome voninahitra azy amin'ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainan'ny Media Day ao amin'ny Toronto tamin'ny Aogositra 22.
Mpiboky boky amin'ny alàlan'ny asany, Cox dia mpitantara tantara malaza sy mpitarika malaza eo amin'ny fiarahamonina. Niditra tao amin'ny tranombokim-panjakana tany Toronto izy tamin'ny naha mpitahiry bokin-jaza ho an'ny ankizy azy tamin'ny taona 1960 ary tamin'ny 1972 dia lasa lohan'ny sampana Parkdale izy ary nandefa fandaharana momba ny fahaiza-mamaky teny sy fandraisana andraikitra hafa izay nampiroborobo ny kolontsaina marobe manerana an'i Toronto. Nandritra ny fotoana nitondrany, i Cox dia nanao ny asan'ny mpisava lalana ny "Black Heritage and West Indian Resource Collection", izay nantsoina hoe "Black and Caribbean Heritage Collection." Vetivety dia lasa iray amin'ireo fanangonana feno indrindra amin'ny karazany ao Canada izy ary ankehitriny, dia mitohy ho loharanom-pireharehana ho an'ny fiarahamonina.
"Ankafizin'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba ny fitiavan'ny Rita Cox hampiroborobo ny lova any Karaiba amin'ny alàlan'ny fanangonana izay novolavolainy ho an'ny tranombokim-bahoaka any Toronto ary koa ireo hetsika fitantarany izay nampita ny tantarantsika tamin'ny taranaka ho avy," hoy i Sylma Brown, talen'ny CTO-USA. "Ny fanolorantenany hitahiry ny kolontsaina Karaiba sy ny fanoloran-tenany hitazona ny faritra ho lohalaharana amin'ny fiarahamonina kanadiana nandritra ny am-polony taona maro no antony hanomezantsika voninahitra azy amin'ny mari-pankasitrahana mandritra ny androm-piainana."
Cox dia nanangana ny "Cumbayah," festival misy lova mainty sy fitantarana. Amin'ny maha mpitantara tantara malaza azy izay nampiala voly ny mpihaino manerantany, ary niantoka ny lova fitantarana ny famakiam-bolan'ny tranom-panjakana any Toronto izy tamin'ny alalàn'ny fampiofanana zana-tantara vaovao, izay maro amin'ireo no mpiasan'ny tranomboky ankehitriny. Taorian'ny nisotroany fisotroan-dronono tao amin'ny tranombokim-panjakana tany Toronto tamin'ny 1995, notendren'ny governemanta Canada ny mpitsara ny zom-pirenena.
Cox dia nahazo mari-pankasitrahana marobe, anisan'izany ny mari-pahaizana momba ny serivisy ho an'ny daholobe an'ny Fikambanan'ny Tranomboky Kanadiana sy ny loka Black Achievement Award (1986). Tamin'ny 1997, Dr. Cox dia notendrena ho mpikambana ao amin'ny Order of Canada noho ny asany miavaka amin'ny fitantarana sy ny fahaizana mamaky teny. Na ny Wilfrid Laurier University na ny York University dia samy nahazo ny mari-pahaizana doctorat.
Holloway Lodging dia nanambara ny fivarotana hotely roa any Nova Scotia
IATA: ny fihenan'ny entana an-habakabaka mandritra ny volana fahavalo manaraka